सरकारी सुविधा लिनेलाई ग्रिनकार्ड नदिने पब्लिक चार्ज नियमको कानुनी व्याख्या (भिडियो) « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अमेरिकी सरकारले आगामी अक्टोबर १४ को मध्यरातदेखि सरकारी सुविधा लिने र लिने सम्भावना हुनेहरुलाई ग्रिनकार्ड नदिने नियम लागु गर्ने भएको छ । खाद्य, आवास लगायतको लागि सरकारको भर पर्ने र सरकारी सुविधा लिनेहरुले यो नियमपछि नयाँ खालको समस्याको सामना गर्नेछन् ।
मेडिकेड, फूडस्ट्याम्प लगायतका सरकारी सुविधा लिएका र लिने सम्भावना भएकाहरुलाई ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्नसक्ने नियमबाट को को प्रभावित हुन्छन् ? ग्रिनकार्डको नविकरणमा यसले समस्या पार्छ कि पार्दैन ? अक्टोबर १५ भन्दा अगाडि यो सुविधा लिएकाहरु वा त्यो भन्दा अगाडि आवेदन दिएकाहरु प्रभावित हुन्छन् वा हुन्नन् ? पहिलेको नियम र अक्टोबर १५ पछि लागु हुने नियममा के फरक छ ? लगायत ट्रम्प प्रशासनको ग्रिनकार्डमा कडाई गर्ने पब्लिक चार्जको ब्याख्या कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसीबाट ।
अक्टोबर १५ भन्दा अगाडि स्टाटस परिवर्तन, अमेरिकाको बसाईको अवधि थप वा ग्रिनकार्ड आवेदन दिएकाहरुको सन्दर्भमा भने नयाँ नियम लागु नहुने जनाइएको छ । तर अक्टोबर १५ पछि आवेदन दिनेहरुका सन्दर्भमा भने नयाँ नियम लागु हुनेछ । नयाँ नियमले आवेदक भविश्यमा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भए नभएकोबारे निर्णय गर्न अध्यागमन अधिकारीहरुलाई विस्तृत तजविज अधिकार प्रदान गर्नेछ ।